Cetilistat (282526-98-1) ထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းသည့်စက်ရုံ
CMOAPI သည် Cetilistat ၏ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးရှိပြီးအရည်အသွေးပြည့်ဝသောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လည်းရှိသည်။ GMP နှင့် DMF အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။
Cetilistat အမှုန့် base သတင်းအချက်အလက်
အမည် Cetilistat အမှုန့်
ပေါ်လာ မီးခိုးရောင် Powder
ပျော်ဝင် အက်တမ်အက်စစ် (Ethyl ester) တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
မော်လီကျူးအလေးချိန် 316.31 ဂရမ် / mol
အရည်ပျော်မှတ် 190-200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်ခြင်း Temp ROOM တွင်အပူချိန်
Cetilistat (CAS အဘယ်သူမျှမ။282526-98-1ATL-962, ATL 962 (သို့) Citilistat ဟုလည်းလူသိများသည်။ အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရန်အတွက်ညွှန်ပြသောဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည့်ကယ်လိုရီနိမ့်အဆီဓာတ်နည်းသောအစားအစာနှင့်သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်လျှောက်တွင်အသုံးပြုသည်။
cetilistat anti-obesity မူးယစ်ဆေးဝါးအပါအ ၀ င်နာမည်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရောင်းချသည် Cetislim, Kilfat, Oblean နှင့် Checkwt ။
Cetilistat သည်အဓိကအားဖြင့်အစားအသောက်အဆီများမှအစာကြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သော benzoxazine၊ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း lipase inhibitor ။
ဘယ်လိုလဲ Cetilistat အဝလွန်ခြင်းကိုကုသ
အဝလွန်ခြင်းသည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ hyperlipidemia၊ ကိုလက်စထရော၊ ကင်ဆာအချို့နှင့်နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
သုတေသနပြုချက်အရကိုယ်အလေးချိန်၏ ၅ မှ ၁၀% အထိပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာရောဂါများကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
Cetilistat ကိုအဝလွန်ခြင်းဆန့်ကျင်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အဝလွန်ခြင်းကိုတားဆီးသည့်အရာများသည်များသောအားဖြင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ကိုတိုးပွားစေသည်။
Cetilistat သည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းပန်ကရိယ lipase inhibitor ဖြစ်ပြီးလူ့လေ့လာမှုများတွင်ထိရောက်သော anti-obesity agent ဖြစ်သည်။
Cetilistat အလုပ်လုပ်တယ် သင်စားသုံးသည့်အစာအတွင်းအဆီ၏အစာခြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူခြင်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဆီသည်အစာကြေသည်မဟုတ်ပါကအူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများအတွင်းမစင်အတွင်းမှထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည်အူအတွင်းရှိ triglycerides (ခန္ဓာကိုယ်ရှိအဆီ / lipid) ကိုဖြိုခွဲရန်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်း lipases များကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်စေသည်။
အဆိုပါ cetilistat သက်ရောက်မှုများ ထို့ကြောင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းထဲမှာပြနေကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ cetilistat သည်အန္တာရာယ်ကိုဖြစ်စေသောကြောင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချရန်သင့် ဦး နှောက်ကိုသြဇာညောင်းစေသောအခြားအဝလွန်ခြင်းအေးဂျင့်များနှင့်ကွဲပြားသည်ဟုဆိုလိုသည်။
Cetilistat သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ကူညီပေးနိုင်သော်လည်းအဝလွန်ခြင်းနည်းသောအာဟာရဓာတ်များကိုအဝလွန်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများပါ ၀ င်သည်။
cetilistat နှင့် orlistat နှစ်မျိုးလုံးသည်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့်ဆေးညွန်းဆေးများဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်အလေးချိန်အောင်မြင်ရန်ရသောမှတဆင့်အလားတူလုပ်ဆောင်ချက် mode ကိုပြ။
Cetilistat နှင့် orlistat တို့သည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း lipases inhibitor ဖြစ်ပြီးအစားအသောက်အဆီ၏အစာခြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အူအတွင်းရှိ triglycerides ပြိုကွဲခြင်းအတွက် lipases မှာတာဝန်ရှိသည်။ မပြောင်းလဲသည့်အဆီများကိုလူ့မစင်အတွင်းအူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့်ဖယ်ထုတ်သည်။ ဒီလုပ်ဆောင်မှုကကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိအဆီများကိုစုပ်ယူပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်။
cetilistat နှင့် orlistat နှစ်မျိုးလုံးတွင်သိသိသာသာအလေးချိန်လျော့ကျကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ cetilistat vs orlistat ၏အောင်မြင်မှုသည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် တွဲဖက်၍ ကယ်လိုရီနည်းသောအာဟာရရှိသောအစားအစာကိုမှီရန်သင့်အားလိုအပ်သောကြောင့်သင်၏နေထိုင်မှုပုံစံပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပလာစမာ glycosylated ဟေမိုဂလိုဘင်အတွက်သိသိသာသာလျှော့ချရေးအားဖြင့်သက်သေပြအဖြစ် Cetilistat အဖြစ် orlistat တိုးမြှင့် glycemic ထိန်းချုပ်မှုပြ။ သူတို့သည်နှလုံးရောဂါ၊ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားခြင်း၊ ကိုလက်စထရောအဆင့်နှင့်ဆီးချိုရောဂါစသည့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ၏အန္တရာယ်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။
cetilistat နှင့် orlistat နှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအများအားဖြင့်မပြောင်းလဲသည့်အဆီကြောင့်အူလမ်းကြောင်းအူလမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည် cetilistat နှင့် orlistat ကိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် orlistat နှင့်ဆက်စပ်သည် cetilistat ထက်ပိုသည်။ ထို့အပြင် cetilistat နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက orlistat နှင့်သက်ရောက်မှုများ၏ပြင်းထန်မှုသည်ပိုမိုသိသာသည်။
cetilistat နှင့် orlistat တို့၏ခံနိုင်ရည်ကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါ cetilistat သည် orlistat ထက်ကောင်းစွာသည်းခံတတ်သည်ဟုသတင်းပို့သည်။
ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ နှင့်အတူအပတ်စဉ်လူနာများပါ ၀ င်သော ၁၂ ပတ်လေ့လာမှုကိုအလေးချိန်လျှော့ချခြင်း၊ glycosylated ဟေမိုဂလိုဘင်လျှော့ချခြင်းနှင့် orlistat နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက cetilistat ၏ခံနိုင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကုသမှုကိုအနိမ့်မှအလယ်အလတ်ရှိသောအဆီဓာတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး metformin ကို အသုံးပြု၍ ဆီးချိုရောဂါရှိသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုက cetilistat နှင့် orlistat နှစ် ဦး စလုံးသိသိသာသာအလေးချိန်လျှော့ချအဖြစ်ကောင်းစွာ glycemic ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါ၏ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သောခါးပတ်လည်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်၎င်းဆေးဝါးများသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဤလေ့လာမှုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ orastat နှင့်ပိုမိုအစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပြီး orlistat-related effect များ၏ပြင်းထန်မှုသည် cetilistat ထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ cetilistat နှင့် orlistat တို့၏ဆိုးကျိုးများမှာ ၄ င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဓာတုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုမှထုတ်ယူခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြောင့် cetilistat ထက် orlistat နှင့်ပိုမိုဆက်စပ်သည်။ ထို့အပြင် cetilistat orlistat ထက်ပိုမိုသည်းခံခဲ့သည်။
ဘယ်သူတတ်နိုင် Cetilistat ကိုအသုံးပြုပါ?
သင်ကိုယ်အလေးချိန်လိုအပ်လျှင် Cetilistat (282526-98-1) ကိုသောက်ရန်သင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ သို့သော်ဤဆေးကိုသောက်နေစဉ်အခြားမည်သည့်ဆေးနှင့်မဆိုကဲ့သို့လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ပါ။
Cetilistat သည် ၂၇ ထက်ပိုမိုသောခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) ရှိသူများအတွက်အကြံပြုသည်။ အကယ်၍ သင်၏ BMI သည် ၂၇ နှစ်အထက်ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဆီးချိုရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါကဲ့သို့သောအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောအခြေအနေများရှိပါက cetilistat ကိုသောက်သုံးရန်အကြံပြုသည်။ BMI ဆိုသည်မှာကိုယ်အလေးချိန်ကိုကီလိုဂရမ်ဖြင့်အမြင့်စတုရန်းမီတာဖြင့်စားခြင်းဖြင့်တွက်ချက်သည်။
သင် cetilistat ကိုသောက်ရန်ရွေးချယ်ပါကသင်၏အစားအစာများနှင့်အတူအကြံပြုထားသော cetilistat သောက်သုံးသောဆေးကိုသေချာစွာသောက်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသော cetilistat သောက်သုံးမှုသည်သင်၏အစာစားပြီးနောက်တစ်နာရီအတွင်းသို့မဟုတ်တစ်နာရီအထိအကောင်းဆုံးအစားအစာများဖြင့်ဖြစ်သည်။
cetilistat မူးယစ်ဆေးဝါးကိုရေတစ်ခွက်နှင့်ပါးစပ်ဖြင့်သောက်ရန်ဆေးတောင့်များ (သို့) တက်ဘလက်ပုံစံဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ cetilistat အမှုန့်ကိုလည်းသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ မှန်ကန်သော cetilistat သောက်သုံးသောပမာဏနှင့်ဆေးကုသမှုကာလကိုသင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကဆေးဝါးအပေါ်အခြေအနေနှင့်ကန ဦး တုံ့ပြန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
Cetilistat ကိုယ်အလေးချိန်ကျ သို့သော်ကလေးများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုမဖော်ပြထားပါ၊ ထို့ကြောင့်သင့်ကိုကလေးများကိုမပေးသင့်ပါ။ အထူးသဖြင့် cetilistat သည်သူတို့၏ကြီးထွားမှုကိုအမြင့်နှင့်ပိုမိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သောကြောင့်အပျိုဖော်ဝင်နေသောကလေးများနှင့်အထူးသဖြင့်ဖြစ်သည်။
Cetilistat သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောမိခင်များ၊ ၎င်းသည်မမွေးသေးသောကလေးငယ်၏ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသောမိခင်များအား cetilistat ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လည်းအကြံပြုပါသည်။
သင့်ဆရာ ၀ န်ကသင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်မှာ hypersensitivity, cholestasis (အသည်းရောဂါ) နှင့်နာတာရှည် malabsorption syndrome ရောဂါစသောအခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့် cetilistat ကိုယူရန်သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။
Cetilistat အမှုန့်ကိုအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။ သို့သော်သင်အကြံပြုထားသော cetilistat သောက်သုံးသောပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကသို့မဟုတ် cetilistat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုသင်တွေ့ကြုံနိုင်သည်။ ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်အစတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သော်လည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့။ ဆေးကိုဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားသင့်သည်။ သူတို့ပျောက်မသွားဘူးဆိုရင်သင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်သင့်တယ်။
အသုံးများသော cetilistat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ၊
အချို့သောရှားပါးသော်လည်းပိုမိုပြင်းထန်သော cetilistat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အောက်ပါဆိုးကျိုးများကိုသင်သတိပြုမိသည့်အခါတွင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းတိုင်ပင်သင့်သည်။
Cetilistat ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ သို့သော်အခြား cetilistat အကျိုးကျေးဇူးများမှာ၎င်းကိုကွဲပြားစေရန်နှင့်အခြားကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကြားတွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော cetilistat အကျိုးခံစားခွင့်အချို့ရှိပါသည်။
Cetilistat သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည့်ဆေးများအပြင်အဝလွန်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသောအရာလည်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဘဝ၌ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းများကိုမကြာခဏအဝလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်အဝလွန်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ အခြေအနေ ၂ ခုသည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့်အူမကြီးနှင့်ရင်သားကင်ဆာကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အဝလွန်သူနှင့်အဝလွန်သူတစ် ဦး အကြားခြားနားချက်မှာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်း (BMI) ဖြစ်သည်။ BMI သည် ၂၅ ထက်ကြီးသည် (သို့) ညီမျှသောအခါလူတစ် ဦး သည်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။ အဝလွန်သူသည် BMI ၃၀ ထက်ကြီးသည်သို့မဟုတ်ညီသည်။
cetilistat ကိုသောက်ခြင်းကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဆီများများစုဆောင်းခြင်းကိုလျှော့ချပေးပြီး BMI ကိုကျန်းမာစေပြီးကျန်းမာတဲ့ဘဝပုံစံကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ၎င်းသည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အခြေအနေများ၏အခွင့်အလမ်းများကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဝလွန်ဆီးချိုရောဂါလူနာများတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေခြင်းနှင့် glycosylated ဟေမိုဂလိုဘင်လျော့ချခြင်းကိုကူညီပါ
ဆီးချိုရောဂါနှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါဟုခေါ်သောဆီးချိုရောဂါဟုခေါ်သည်။ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါသည်ကိုယ်ခန္ဓာဆဲလ်များသည်အင်ဆူလင်၏သင့်လျော်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်သည့်အခါတွင်ဖြစ်ပွားသည်၊ ၎င်းသည်သွေးဂလူးကို့စ်ကိုဆဲလ်များသို့ညွှန်ကြားရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်သွေးထဲမှာဂလူးကို့စစုဆောင်းခြင်းစေပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းသည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
Glycosylated ဟေမိုဂလိုဘင် (ဂလူးကို့စ်သည်ဂလူးကို့စ်ကိုပေါင်းစပ်ပေးသော) ဟီမိုဂလိုဘင်သည်ရေရှည်ဆီးချိုရောဂါထိန်းချုပ်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ glycosylated ဟေမိုဂလိုဘင် (HbA1c) သည်လွန်ခဲ့သောသုံးလအတွင်းပျမ်းမျှအားဖြင့်ဂလူးကို့စ်ကိုပြသသည်။ ပုံမှန် glycosylated ဟေမိုဂလိုဘင်ပမာဏသည် ၇% ရှိသော်လည်းဆီးချိုရောဂါရှိသူအများစုသည် ၉% သာရရှိနိုင်သည်။
၁၂ ပတ်ကြာကျပန်းကျပန်း၊ လက်တွေ့ကျလေ့လာမှုတစ်ခုအရ၊ ၂ ဆီးချိုရောဂါရှိသည့်အဝလွန်သူများကို cetilistat (နေ့စဉ် ၃ ကြိမ် ၃၀၊ ၈၀၊ ၁၂၀ မီလီဂရမ်) ပေးသည်။ သူတို့သည် hypocaloric အစားအစာကိုစွဲကိုင်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ Cetilistat သည်အလေးချိန်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်နှင့် glycosylated ဟေမိုဂလိုဘင် (HbA12c) ကိုလျှော့ချရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ cetilistat သည်ကောင်းစွာသည်းခံကြောင်းကိုလည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ထိရောက်မှုရှိခြင်းအပြင်၎င်းသည်ပိုမိုများပြားသည်။ Cetilistat သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ပျော့ပျောင်းသောအလယ်အလတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိပြီး cetilistat ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
အဆင့် -၂ လက်တွေ့လေ့လာမှုကို ၁၂ ပတ်ကြာအောင် cetilistat နှင့် orlistat နှစ်မျိုးလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောဆေးနှစ်မျိုးသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း၊ ဂလိုက်ကိုးလိုင်းစ်ဟီမိုဂလိုဘင်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ခါးပတ်လည်ကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင် cetilisat သည် orlistat ထက်ကောင်းမွန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး cetilistat နှင့်ဆက်စပ်သောအနည်းငယ်သောဆိုးရွားသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံ (အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း) သည်သတ်မှတ်ထားသောကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်မီသည့်အခါသင့်ဆရာဝန်ကညွှန်းသောကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းစေသောဆေးကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ Cetilistat သည်အဆီနည်းသောအစားအစာနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်သည့်ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အချိန်များစွာယူသောအခြားအဝလွန်ခြင်းကိုတားဆီးသောဆေးများနှင့်မတူဘဲ cetilistat သည်လိုချင်သောကိုယ်အလေးချိန် ၁၂ ပတ်ခန့်ကြာသည်။
ကိုလက်စထရောသည်ဖယောင်းသဘာ ၀ ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဆဲလ်များတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်အလွန်အကျွံသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပြissuesနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
အချို့သောအသားများ၊ ကြက်များနှင့်အဆီပြည့်ဝသောနို့ထွက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောသင်စားသုံးသည့်အစားအစာများမှအချို့ကိုလက်စထရောလ်ကအသည်းကပြုလုပ်သည်။ ကိုလက်စထရောအမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိသည်။ နိမ့်သိပ်သည်းဆ lipoprotein (LDL) ကိုလက်စထရောသို့မဟုတ် "မကောင်းတဲ့" ကိုလက်စထရောနှင့်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ lipoprotein သို့မဟုတ် "ကောင်းသော" ကိုလက်စထရော။ LDL သည်သွေးလွှတ်ကြောများတွင်အဆီများများစုစည်းခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသဖြင့်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေသည်။
အဝလွန်ခြင်းသည်မြင့်မားသောကိုလက်စထရောဓာတ်ပမာဏကိုမြင့်တက်စေသည်။ အဝလွန်ခြင်းသည်သင်စားသုံးသောအဆီများသို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏တုန့်ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် LDL ကိုလက်စထရောပမာဏတိုးပွားစေသည်။ အဝလွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆီဓာတ်စားသုံးမှုပြောင်းလဲမှုကိုတုံ့ပြန်မှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ထို့အပြင်အင်ဆူလင်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းရှိသည့်လူနာများတွင်လည်းတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိပုံမှန်အဆီများကိုလည်းထိခိုက်သည်။
Cetilistat သည် LDL ကိုလက်စထရောနှင့်စုစုပေါင်းကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကြွက်များနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် cetilistat ကိုနှုတ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်အခါအဝလွန်ခြင်းနှင့်ကိုလက်စထရောကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခဲ့သည်။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဆိုသည်မှာနှလုံးသို့မဟုတ်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောရောဂါများကိုရည်ညွှန်းသည်။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများတွင်နှလုံးရောဂါနှင့်အူဂျီနာ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါနှင့်အခြားသူများအကြားအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများပါ ၀ င်သည်။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏အကြောင်းရင်းသည်တိကျသောရောဂါပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ဥပမာ၊ သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့်အစွန်အဖျားသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများသည်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း၊ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းနည်းပါးခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏ ၅% ခန့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
ထို့ကြောင့် Cetilistat သည်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကိုကာကွယ်ရာတွင်အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သောကျန်းမာသောအစားအစာကိုအားပေးခြင်းဖြင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
၁၂ ပတ်ကြာကျပန်းနှစ်ကြိမ်မျက်စိကွယ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ဆီးချိုရောဂါရှိသောဆီးချိုရောဂါရှိသူများကို cetilistat ကိုနေ့စဉ် ၃၀၊ ၈၀၊ ၁၂၀ မီလီဂရမ်တွင်သုံးကြိမ်သောက်သုံးခဲ့သည်။ သင်တန်းကာလအတွင်းအဆီနည်းသောအစားအစာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်သင်တန်းသားများကိုလည်းအကြံပေးခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကသိသိသာသာအလေးချိန်လျှော့ချခြင်းနှင့်တိုးတက်လာသော glycemic ထိန်းချုပ်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ထို့အပြင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်သည့်ခါးပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သိသိသာသာလျော့ကျသွားသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ cetilistat သည် ၀ င်ရောက်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ခဏတာအတွင်းသိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်သည်။
ငါဘယ်မှာလုပ်နိုင်မှာလဲ Cetilistat ကိုဝယ်ကြလော့?
သင်၏အိမ်တွင်သက်သောင့်သက်သာဖြင့် cetilistat ကိုအွန်လိုင်းတွင်ဝယ်ယူရန်သင်စဉ်းစားပါက။ cetilistat အမှုန့်ကို cetilistat ပေးသွင်းသူများသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းတွင်ရနိုင်သည် cetilistat ထုတ်လုပ်သူများ စတိုးဆိုင်များ။ CMOAPI သည်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကောင်း။ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချသော cetilistat ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထံမှ cetilistat အမှုန့်သို့မဟုတ်အခြား cetilistat ဆေးတောင့်ကိုဝယ်တဲ့အခါ CMOAPI သို့မဟုတ်အခြား cetilistat ပေးသွင်းသူများသည်ဆေးဝါးများကိုသင့်တော်စွာအသုံးပြုရန်တံဆိပ်များကိုသေချာစွာစစ်ဆေးသည်။ cetilistat ထုတ်လုပ်သူမှညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအကြံပြုထားသော cetilistat သောက်သုံးသောပမာဏကိုစဉ်းစားပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏အကြံပြုချက်များကိုလည်းလိုက်နာပါ။
စာဖတ်ခြင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း cetilistat ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံများမှသင့်အား၎င်း၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ cetilistat ၀ ယ်ယူသူအများစုသည်အွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်ယူကြပြီးသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေခံ၍ cetilistat ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုထားခဲ့နိုင်သည်။
Cetilistat စျေးနှုန်း သင်ဝယ်ချင်သောအခါလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ CMOAPI သည်ယှဉ်ပြိုင်သော cetilistat စျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းကောင်းပေးနိုင်သော cetilistat ပေးသွင်းသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် cetilistat စျေးနှုန်းများသည်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားမျက်စိမမြင်သင့်ပါ။
သင့်အိမ်၏သက်သောင့်သက်သာရှိမှုမှ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အလျင်စလိုဝယ်ယူရန်သွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကြိုတင်လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများရရှိနိုင်မှုကိုသိရန်သင့်လျော်သောအစီအစဉ်များပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေသေးသည်။
Bryson, အေ, de la Motte, အက်စ်, & Dunk, C. (2009) ။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ဝတ္ထုအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း lipase inhibitor cetilistat အားဖြင့်အစားအသောက်အဆီစုပ်ယူမှုလျှော့ချ။ လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ၏ဗြိတိန်ဂျာနယ်, 67(3), 309–315. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2008.03311.x.
Hainer V. (2014) ။ antiobesity မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ pharmacotherapy အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူအမြင်, 15(14), 1975–1978. https://doi.org/10.1517/14656566.2014.946904.
Kopelman, P. , Groot, G. အ, Rissanen, အေ, Rossner, အက်စ်, Toubro, အက်စ်, Palmer, R. , Hallam, R. , Bryson, အေ, & Hickling, RI (2010) ။ အဝလွန်ဆီးချိုရောဂါအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်, HbA1c လျှော့ချရေးနှင့်ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled အဆင့်2ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက် cetilistat ၏သည်းခံစိတ်: orlistat (Xenical) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အဝလွန်ခြင်း (Silver Spring, Md ။ ), 18(1), 108–115. https://doi.org/10.1038/oby.2009.155.
Kopelman, P; Bryson, A; Hickling, R ကို; Rissanen, A; Rossner, S; Toubro, S; Valensi, P ကို ​​(2007) ။ "Cetilistat (ATL-962)၊ အသစ်သော lipase inhibitor: အဝလွန်လူနာများအတွက်အလေးချိန်လျှော့ချရေး ၁၂ ပတ်ကြာကျပန်း၊ အဝလွန်ခြင်း၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 12 (31): 3-494 ။ Doi:9/ sj.ijo.10.1038 ။ PMID 0803446 ။
Padwal, R ကို (2008) ။ "Cetilistat, အဝလွန်ခြင်း၏ကုသမှုအသစ် lipase inhibitor" ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမူးယစ်ဆေးဝါးအတွက်လက်ရှိအမြင်။9(4): 414- PMID 18393108 ။
Yamada Y၊ Kato T၊ Ogino H၊ Ashina S၊ Kato K (၂၀၀၈) ။ ပန်ကရိယ lipase inhibitor အသစ်ဖြစ်သော Cetilistat (ATL-2008) သည်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေပြီးကြွက်များတွင် lipid ပရိုဖိုင်းများကိုတိုးတက်စေသည်။ ဟော်မုန်းနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်သုတေသန။ 962 (40): 8- Doi: 539 / s-10.1055-2008 ။ PMID 1076699. S18500680CID2။